Real Oo Heshay Aqbaar Aan Fiicneyn Ee Ciyaaryahankooda Sergio Ramos
HomeHoryaalka SpainReal oo heshay aqbaar aan fiicneyn ee ciyaaryahankooda Sergio Ramos
November 20, 2020 Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Real Madrid ayaa weyneysa Sergio Ramos, kaasoo garoonka ka baxay intii lagu guda jiray kulankii Nations League ee u dhaxeeyay Spain iyo Jarmalka: waa dhaawac muruqa ah.
Akhbaar xun ayaa u timid Zinedine Zidane iyadoo la fiirinayo dib u bilaabashada horyaalada iyo Champions League : Real Madrid ayaa lumisay Sergio Ramos , kaasoo ku soo baxay dhaawac ka soo gaaray kulankii Nations League ee ay Spain 6-0 kaga badisay Jarmalka .
Kabtanka Blancos xaqiiqdii dhaawac ayaa ka soo gaaray muruqa midig, waana inuu maqnaadaa ugu yaraan 10 maalmood. Ramos ayaa sidaas darteed ku qasbanaan doona inuu seego kulamada La Liga ee ay la ciyaarayaan Villarreal iyo Alaves , laakiin waxa ka horeeya kulanka weyn ee Champions League ee Inter .
Tani waa hadalka rasmiga ah ee Real Madrid ka soo saartay xaalada Ramos:
“Ka dib tijaabooyinkii qalabka ee maanta la sameeyay, dhaawac ka soo gaaray muruqa lugta midig ee Sergio Ramos. Soo kabashada ciyaaryahanka ayaa sii wadi doonta in la qiimeeyo.”